China China N'ogbe High Quality Mpi Ahịa Red ọhụrụ Apple emepụta na suppliers | AGR
Best Price Chinese Export New Akuku Fresh Purple Red ...
bupu N'ogbe ọhụrụ akwụkwọ nri ginger na garlic ...
Ezigbo ọnụahịa ọnụahịa china ọhụrụ ahịhịa ọhụrụ ginger ọhụrụ
China N'ogbe High Quality Mpi Price Red f ...
Mbupụ 2020 ọhụrụ akuku ọhụrụ apụl mkpụrụ osisi nwere ezigbo ego
China N'ogbe High Quality Mpi Price Red ọhụrụ Apple
Na ekwukwa n'akwụkwọ uru apụl
1, apụl bụ ụdị obere kalori nri, gram 100 ọ bụla na-ewepụta 60 kcal ọtụtụ ọkụ.Apple nri dị na soluble, dị mfe nke ahụ mmadụ, nke a maara dị ka "mmiri na-enye ndụ" .Ọ na - enyere aka igbari sọlfọ na mee ka anụ ahụ dị nro ma dịkwa nro.
2, apụl nwere “mkpụrụ amamihe”, “mkpụrụ osisi nchekwa” aha laudatory. Eri eri apụl kemgbe ogologo oge ka ọ mara mma iji chekwaa na ọgụgụ isi. Apụl bara ụba na shuga, vitamin, mineral na ihe ndị ọzọ bara uru maka ụbụrụ.
3. apụl bara ọgaranya na zinc. Dika nyocha, zinc bu akuku nke otutu enzymes di mkpa na aru mmadu na ihe di mkpa iji kwalite uto na mmepe.
4. arosì apụl bụ ọgwụ na-egbochi ịda mba na nkụda mmụọ. Ndị ọkachamara achọpụtala mgbe ọtụtụ nyocha gachara na, n’etiti ọtụtụ isi, ísì apụl nwere mmetụta kachasị emetụta mmadụ na ndị mmadụ, ọ nwere mmetụta doro anya na mkpochapụ nke ịda mbà n’obi uche. itinye akwụkwọ gosipụtara na ọnọdụ nke ndị ọrịa nwere ịda mbà n'obi na-akawanye mma mgbe ha na-anụ isi apụl apụl, mmụọ dị jụụ ma nwee obi ụtọ, ewepụrụ mmụọ ịda mba.
5. Malic acid dị n’ime apụl nwere mmetụta na-acha ọcha. Ọtụtụ mmadụ na-echegbu onwe ha gbasara ihe ize ndụ nke ire eze n’ihi acid nke apụl. Apụl e tinyere chiiz na-ejedebe acidity, na iri apụl nwekwara ike inye aka hichaa ezé gị nke ọma.
Vitamin C na apụl bụ nchebe nke mkpụrụ obi, ọrịa obi na ndị ọrịa nwere ahụike dị mma.
N'ihi ya, ụfọdụ ndị apụl apụl anaghị enwekarị azụ oyi karịa ndị na-erighị ma ọ bụ obere apụl. N'ihi nke a, ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na ndị dọkịta akpọrọ apụl "mkpụrụ osisi na-eduzi nduzi ọ bụla" ma ọ bụ "ndị ọkachamara n'ozuzu". dị njọ karịa, iri apụl karịa nwere ike imezi usoro iku ume na ọrụ ngụ, kpuchido ngụgụ site na uzuzu na soot na ikuku.
Nke gara aga: Mbupụ 2020 ọhụrụ akuku ọhụrụ apụl mkpụrụ osisi nwere ezigbo ego
Osote: Natural Healthy Premium Organic Mkpụrụ Nkịtị White Garlic Fresh
Mbupụ 2020 ọhụrụ akuku ọhụrụ apụl mkpụrụ osisi na goo ...